Afrika Mainty13 Jolay 2012
Nikorotandrotana ny taona 2011 ho an'ny kaontinanta Afrikana tamin'ny fisian'ny revolisiona, fikasana hanongam-panjakana ary ny krizy politika mahery setra maro. Saingy nampalahelo moa fa nampiharihary ny hany fara-vitany amin'ny fiatrehany ireny toe-draharaha ireny ny vondron'ny firenena afrikana 53 izay manana ny iraka hanamafy ny fitoniana eo amin'ny faritra sy ny...
Zambia: Lasa Lavitra Loatra Ny Hatsikan'ny Filoha?
Afrika Mainty12 Jolay 2012
Noheverina ho kivazivazy maivana eo amin'ny Filoha Michael Sata sy ny filoha Amerikana teo aloha George W. Bush, na izany no nampinoana ny Zambiana tao amin'ny fanambarana navoakan'ny tao amin'ny Lapam-Panjakana raha nampahatsiaro tamin'ny vahiny ny talohan’ [ilay firenena vahiny nampihatra] ny fanjanahantany sy ny fanandevozana ny mpampiantrano. Maro amin'ny Zambiana an-tserasera...
Afrika Mainty10 Jolay 2012
Andro vitsivitsy monja taorian'ny nanokafana ny Vovonana GV2012 tao Nairobi, nahitana fanapoahana baomba mahafaty sy fakana an-keriny tao an-tanànan'i Mombassa sy Garissa tao Kenya. Ny voalohany volana jolay, tao an-tanàndehibe kenyana ao Garissa, ny andian'olona misarontava namono olona 17 sy nandratra olona 45 tamin'ny alalan'ny fanafihana mita-piadiana sy grenady tamin'ny...